Ento mody aho: miantso helikoptera famonjena ny mpandeha an-tongotra soedoà "sasatra loatra ny mandeha"
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ento mody aho: miantso helikoptera famonjena ny mpandeha an-tongotra soedoà "sasatra loatra ny mandeha"
Efa nahatsapa reraka be ve ianao ka maniry ny hitondra anao mody? Amin'ny tranga iray amin'ny mpandeha an-tongotra soedana iray reraka, dia izany indrindra no nitranga rehefa namaly ny "vonjy taitra" ny iraka mpamonjy angidimby iray ary nanidina izy haka ilay vehivavy.
Ireo mpamonjy voina tendrombohitra dia naharay antso fa vehivavy iray izay mitsangatsangana miaraka amin'ny vadiny any amin'ny faritra avaratry Jokkmokk dia voalaza fa tsy afaka nandeha.
"Tsy fantatro hoe nanao ahoana ny resaka, fa ny vaovao azonay dia hoe tsy afa-mandeha izy, ary avy eo dia noraisina ny fanapahan-kevitra hanaovana asa famonjena," hoy ny filazan'ny mpampita vaovao ao an-toerana, Marie Andersson.
Na izany aza, nivadika ho tsy dia ratsy araka ny nantenaina ny zava-nisy, satria tonga tany amin'ilay toerana ny angidimby famonjena mba hitady ny hany zavatra nanakana ilay vehivavy tsy hidina avy any an-tendrombohitra dia havizanana.
Satria tsy mitaky iraka famonjena izany, dia nasaina nanapa-kevitra ny mpivady fa hiala sasatra ary avy eo handeha hidina, na handoa krone soedoà 3,000 (3,680 dolara) handehanany helikoptera. Voalaza fa nandray ny safidy farany izy ireo.
Araka ny filazan'ny polisy, ny serivisy famonjena dia mahazo antso matetika avy amin'ireo mpihanika tendrombohitra amin'ny toe-javatra tsy mampidi-doza.
“Ny famonjena ny tendrombohitra dia tokony ho rehefa misy loza ateraky ny ainy na ny fahasalamana. Tamin'izany no tokony hanampianao ny olona hidina, fa raha manana sakafo sy tafo eo an-dohanao ianao, angamba tsara kokoa ny miandry kely mandra-pahatsapanao ho matanjaka kely avy eo, ”hoy i Andersson.
Ny Minisitry ny Fanatanjahantena Kanadiana dia miarahaba ny fanokafana ny Lalao Kanata fahavaratra 2017 any Winnipeg